Siminaar looga hadlayay doorka odayaasha dhaqanka ka qaadan karaan ammaanka iyo nabadgelyada oo Muqdisho lagu qabtay
Mogadishu Arbaco 4 July 2012 SMC
Siminaar uu soo qaban qaabiyay Hey'adda Midnimada Dhalinyarada Soomaaliyed ee UYS oo ay ka qeyb galeen Odayaal dhaqameedyo ayaa maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayay doorka odayaasha dhaqanka ay ka qaadan karaan ammaanka iyo nabadgelyada.
Ugu horeyn Siminaarka oo uu furay Abuukar Sheekh Cusmaan (Abuukar Ganey) ayaa sheegay in Hey'adda UYS ay muddo badan odayaasha u qabaneysay siminaaro, iyo wacyi gelin, isagoo xusay in bil walba ay u faa'ideyso inay is arkaan odayaasha, si loo wacyi geliyay, isla markaana bulshada ay u gaarsiiyaan.
"Odayaasha dhaqanka waxay door ku leeyihiin bulshada dhexdeeda, waxay gacanta ku hayaan masiirka umada, odayaasha waxay qeyb wanaagsan ka soo qaateen halganka gobonimo doonka, ayaga aas aas u ahaa xornimadii dalka"ayuu yiri Abuukar Ganey.
Abuukar Ganey ayaa sheegay in doorka odayaasha uu cad yahay, isagoo ugu baaqay odayaasha u fadhiya ansixinta dastuurka in umada aayahooda ka taliyaan, isla markaana u keenaan dastuur umada xal u ah.
Xildhibaan Cali Seeko oo ka hadlay siminaarka ayaa sheegay in maanta la joogo xornimadii, isla markaana odayaasha looga baahan yahay inay dalka samata bixiyaan, isagoo tusaale u soo qaatay, sida xilligan odayaasha talada dalka gacanta looga geliyay.
"Sida la socotaayn 1950 soomaaliya waxay aheyd waa la garan karaa, ragga halkaa fadhiyay inay soo bandhigeen halganka waqtigaas ka dhib badan ayaa maanta jira, in laga mira dhaliyo ayaa la idinka baahan yahay, maanta dhaqanka waa nadiif, taladii iyage gacanta ugu jirtaa, seef ayaana ku kor socotaan, in aadan ceeboobin, oo aad siyaasiyiinta iyo ururadii diinta la mid noqon"ayuu yiri Xildhibaan Cali Seeko.
Xubnaha Gudiga Odayaasha dhaqanka ee UYS oo hadalo ka jeediyay ayaa sheegay in doorka odayaasha dhaqanka lagu muujin karo is dhex gal iyo inay u madax banaanaadaan howsha loo igmaday, waxaana ka mid ahaa xubnaha talooyinka soo keediyay C/llaahi C/lle Wehliye iyo Xasan Maxamed Diirshe.
Aadan Cali Nuur oo ka mid ah xubnaha Gudiga Odayaasha ayaa sheegay in doorka culimada uu yahay mid diinta saxda ah ku turjumeysa, isla markaana isku xirmaan culimada si ay ugu istaagaan in diinta aan si qaldan loo fasirin.
Sidoo kale waxa ka hadlay siminaarka mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo lagu magacaabo Nuur Xaashi Cabdi oo sheegay in fursada odayaasha ay soo laabatay, isagoo ka dalbaday Odayaasha inay bad baadiyaan umada Soomaaliyed.
Qaar ka mid ah ka qeyb galayasha oo ka dooday ilaa lix qodob oo ahaa ajandaha siminaarka ayaa si gaar ah uga hadlay maqaamka ay yeelaneyso Caasimada Muqdisho, iyo inay tahay lama taabtaan, waxaana ay ka digeen in Muqdisho oo ah caasimadii dalka in aan loo aqoonsan meel aan caasimad aheyn.
Ugu dambeyn Caaqil Xasan Cilmi oo ka hadlay siminaarka ayaa sheegay in Soomaaliya u baahan tahay dowladda, isagoo cadeeyay in odayaasha dhaqanka fara gelin lagu haayo, isla markaana fursada kaliya ee ay Soomaaliya heysato ay yihiin odayaasha dhaqanka, waxaana uu ku baaqay in odayaasha looga dambeeyay masiirka umada soomaaliyed.